विद्यालयमा प्रेतात्मा भगाउन धामी लगाइयो ! - Birgunj Sanjalविद्यालयमा प्रेतात्मा भगाउन धामी लगाइयो ! - Birgunj Sanjalविद्यालयमा प्रेतात्मा भगाउन धामी लगाइयो ! - Birgunj Sanjal
विद्यालयमा प्रेतात्मा भगाउन धामी लगाइयो !
१८ मंसिर २०७६, बुधबार ०५:१६
विराटनगर । मोरङको बेलवारी ६ बोराबाँध स्थित वीरेन्द्र माध्यामिक विद्यालयमा प्रेतात्मा जागेको भन्दै धामी लगाएर चिन्ता बसाइएको छ । विद्यालयका छात्राहरु एकपछि अर्को गर्दै बिरामी हुन थालेपछि विद्यालय प्रशासनले नै धामी बोलाएर चिन्ता जगाएको हो । स्थानीय धामी (बिझुवा) ले विद्यालयमा ढ्याङ्गे ठटाउँदै मन्त्र फ्याँकेर प्रेत भगाएको दाबी गरिएको छ ।
विद्यालयको शौचालयमा शौच गर्न जाँदा चोटैचोट लागेको सेतो र रातो बस्त्र ओढेको आकृतिकी महिला देखिएको भन्दै कक्षा ४ देखि ६ सम्मका छात्रा बिरामी पर्न थालेपछि यस्तो गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । उनीहरुमा बर्बराउने, तर्सिने र काम्ने समस्या देखिएको शिक्षिका डिका नेपालले बताइन् ।
अभिभावकको सुझावअनुसार नै विद्यालय प्रशासनले लक्ष्मीमार्गका धामी मणी राईलाई विद्यालय बोलाएर चिन्ता बसाएको हो । उनले जोखना हेरेर विद्यालय परिसरमा आत्मा प्रवेश गरेको निरक्योल भएको बताउँदै भने,‘‘झारफुकपछि आत्मालाई मुन्छाएर धपाइदिएँ ।’’ मंसिर १० गते मंगलबार एक छात्रा विद्यालयको शौचालयमा गएपछि रुने कराउने गर्दै बाहिरिएपनि अन्य छात्रामा पनि समस्या देखिएको विद्यालयले जनाएको छ ।